🥇 ▷ Samsung Harman Kardon HW-Q60R Soundbar waxaa lagu qiimeeyaa $ 170 ✅
Samsung Harman Kardon HW-Q60R Soundbar waxaa lagu qiimeeyaa $ 170
Kaliya waa inaan kuu sheegaa haddii aad iibsato wax halkan lagu muujiyey, Mashable wuxuu heli karaa gudi la shaqeeya.
Saaxiibka ugufiican ee habeen filim filim gurigiina ku yaal.
Sawirka: xarunta Samsung / mashable
TL; DR: Soo qaado Samsung hW-Q60R Harman Kardon Soundbar oo keliya $ 329.99 markii lagu amro dukaanka PCMag. Sababta oo ah badanaa waxay ku kacdaa $ 499.99, waxaad badbaadin doontaa 34%.
Hadaad seegto, kaliya waxaan tijaabinay oo aan kugu boorinay inaan bad badbaadinno badda inta aan wali awoodno. Wax walba waa cadyihiin, haa. Laakiin haddii aad u baahan tahay inaad ka baxsato filim adduunka ah, markaa War wanaagsan Sannadkan runtiina way gashay.
Intii aad raadineysay neef aad naga hesho, u jiifso si raaxo leh oo raaxo leh saqafkaaga guriga lagu sameeyo, markaa maxaad u sii qaadan weyday oo aad kor ugu qaadaysaa khibradaada kubbadda dhawaaqa cabsida leh si aad u gasho, huh? Taasi waxaa loo yaqaanaa la qabsashada. Laakiin maxaa yeelay ilaa habeenka Axadda, waxaad ka heli kartaa Samsung HW-Q60R Harman Kardon Soundbar dukaanka PC Mag Shop (oo ay iska leedahay daabacaha Mashable, Ziff Davis) qiimo aad u sarreeya oo ah $ 170, weligeed kama dhicin daqiiqad ka fiican.
Saaxiibka ugu fiican ee gurigaaga tiyaatarka habeenkii ah, Samsung HW-Q60R projectbar projectbar cajiib leh cod leh jihada codka ee had iyo jeer la socota ficil-shaashadda, Thanks to Samsung Acoustic Beam technology iyo 4K tallaabada iyo HDR10. Heshiiskan waxaa lagu macaaneynayaa weheliyaha subwoofer-ka ee wireless-ka ah ee loogu talagalay in lagu gaarsiiyo bass hodan ah, awood badan markii runtii loo baahdo.
Iyo sababta oo ah waxaa lagu qalabeeyay tikniyoolajiyadda ‘Adaptive Sound’ ee Samsung si ay u falanqeyso astaamaha dhawaaqa isla markaana si otomaatig ah u adeegsato khibradaha madadaalada ee immersive, ma jiro hab ka wanaagsan oo lagu maareeyo shaashadaha shaneemooyinka gurigaaga bishaan. (Filimka Lego 2, gaar ahaan.)
Qalabka dhawaaqa ee Samsung ayaa leh qalab leh Bluetooth oo si fudud loogula jaan qaadi karo aaladdaada bilaa-waayirka ah, sidaa darteed waxaad ku buuxin kartaa gurigaaga maqal cod leh oo hareeraha ka socda liiska aad jeceshahay ee Spotify ee riix batoonka.
Booqo dukaanka PCMag usbuucan si aad u badbaadisid $ 170 Samsung HW-Q60R Harman Kardon Soundbar oo leh subwoofer si kor loogu qaado madadaaladaaga.